बागमतीको मुख्यमन्त्री इन्द्र बाँनिया कि राजेन्द्र पाण्डे ? « News24 : Premium News Channel
बागमतीको मुख्यमन्त्री इन्द्र बाँनिया कि राजेन्द्र पाण्डे ?
काठमाडौं । बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आज प्रदेश संसदबाट विश्वासको मत लिँदै छिन् ।
मुख्यमन्त्री भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री शाक्यले आज विश्वासको मत लिँदैछिन् । तर, उनी अल्पमतमा रहेकी छिन् ।
एमाले विभाजन भएपछि एमालेका १३ जना प्रदेशसभा सदस्यले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि मुख्यमन्त्री शाक्य प्रष्ट रुपमा अल्पमतमा छिन् ।
माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको स्पष्ट बहुमत रहेकोले बागमतीमा मुख्यमन्त्री शाक्य पदबाठ महिना दिनमै हट्ने निश्चित छ । र, शाक्यपछिको मुख्यमन्त्री नेकपा एसलाई गठबन्धनले दिने यसअघि सहमति भएको थियो ।
माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसले बागमतीमा राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने यसअघि नै जानकारी दिइसकेको छ । तर, आइतबार मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत लिनुअघि कांग्रेस पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको छ ।
कांग्रेसबाट इन्द्र बाँनियाले मुख्यमन्त्रीमा आकांक्षा देखाएका छन् । गठबन्धनले नेकपा एसका पाण्डेलाई नै बागमतीको मुख्यमन्त्री बनाउने यसअघि निर्णय गरेको भए पनि अब बागमतीमा पाण्डेक कि बाँनिया ? भन्नेमा गठन्धनले निर्णय गर्नेछ ।
११० सदस्यीय प्रशसभामा रहेको बागमतीमा बहुमत पुर्याउन ५६ सांसदको आवश्यकता पर्छ। तर, एमालेसँग ४३ सांसद मात्रै रहेको छ भने सत्ता गठन्धनसँग स्पष्ट बहुमत रहेको छ ।